Baningi nakho ezintsha kanye nemithwalo yemfanelo livela abazali abasha kokuzalwa kwengane. ngokuvamile umama menu kuncike Ukukhetha esiqinile, ngoba ubisi lwebele ingane ithola ukunakekelwa kanti ezinye njalo kufanelekile umzimba wakhe akusiwona izidakamizwa ezinamandla. Izithelo kanye amajikijolo kungabangela ngempela impendulo ezihlukahlukene kusukela imvuthu yakho. Ake sibheke lo mbuzo, ngabe umama oncelisayo enakekela kungaba ukucwila ukukufaka imenyu yakho?
Okokuqala Yiqiniso, kufanele kuphawulwe ukuthi lezi zithelo akuzona emnandi kuphela ukunambitheka, kodwa kuyasizuzisa emzimbeni. Ziyakwazi kuhle ipheshana wokugaya ukudla, kokuba impahla laxative. imiphumela ezuzisayo on umsebenzi inhliziyo, ezinye izinhlobo ukusetshenziswa okuhle ukuthuthukisa umbono. ukwehlisa umfutho wegazi futhi bathambekele ukucwila. Kuhlanganisa Vitamin B, PP, C, A. Kuyinto ecebile potassium, i-phosphorus, i-calcium.
Mhlawumbe bonke laba izingxenye uzokhombisa ukuthi unalo igciwane e ngokuzindla ekutheni umdlezane iplamu ... Kufanele kuqashelwe futhi ehilelekile ukuthi ifomu omisiwe, kanye kule sezimoto, kuba enomsoco ngaphezu kokuba Asanda. Lena esiphethweni izazi eziningi ukutadisha yonke impahla yayo.
Kaningi ungathola umbono yabanye ukuthi ibele kufanele ibe ngokuphelele konke ukunqabela ngokwakho ezinjalo. Lesi siphetho eyiphutha. okusanhlamvu Ngokulinganayo ewusizo, imifino, futhi-ke, kungaba plums umdlezane nezinye izithelo. Okuqakathekileko kuphela ngaleso sikhathi, kuyafaneleka ukuzisebenzisa kancane, ngakho kwakungekho emibi for umntwana. Ukudla e kwenkathi lactation kufanele kube zahlukahlukene kakhulu, ekuqongeleleni amavithamini namaminerali.
Plum umdlezane kuzosiza ngalezo zikhathi lapho ingane ngasizathu simbe, ngavela ngayithanda kakhulu. Kulokhu, kungenzeka ukwenza compote. Kodwa kubalulekile ukugcizelela ukuthi lolu hlobo njengomuntu ukuhlakula, noma kunjalo akufanele inikezwe ngesimo compote of imvuthu yakho - kungabangela colic.
Ukucabanga ukuthi umdlezane iplamu afake ekudleni kwakho, kumelwe sicabangele futhi acabangele impahla yayo isisu, okuyinto zingathinti nje umzimba wakho, kodwa futhi ku ingane umzimba, okuyinto kuyokwenza ngenkani ukuba Thenga kakhulu eningi namanabukeni.
Kodwa kanye zonke izimfanelo ezinhle isithelo salowo muthi, kodwa kukhona izici ezingezinhle - asikwazi sokudliwa abantu abaphethwe isifo sikashukela, njengoba sekushiwo ngenhla, liphinde engathandeki izingane ngenxa ubuhlungu esiswini kanye usongo sohudo.
Uma namanje ungaqiniseki ingabe uyafisa yini ukuthi ungahlala uya yokwamukela kuya uchwepheshe ku ibele ukuthi ngamunye ukhetha ukudla ofanele, sicabangisisa ngazo zonke izici zomzimba wengane yakho. Futhi, nalo mbuzo, ungase usize wabantwana, owazi kahle ukuthi nawe ungadla ngesikhathi lactation, nokuthi kufanele kulinganiselwe izinombolo.
Ngemva kokubukeza zonke "kochwepheshe" futhi "nebubi" ka udaba okunjalo impikiswano ngokuthi "kungakhathaliseki nepulamuzi umdlezane", ngamunye ungase ngokuzimela unquma ulifake ekudleni kwakho noma cha. Akufanele sibakhohlwe ukuthi ukwethula umkhiqizo omusha ukuba imenyu yayo, benaka ukusabela ingane, hhayi okungaphezu kokukodwa umkhiqizo izinsukwana.